IMthethomusha izomela iKZN kowamakwaya | News24
IMthethomusha izomela iKZN kowamakwaya
ISITHOMBE: mAKHOSANDILE ZULUIkwaya yabafundi babafana besikole samabanga aphansi iMthethomusha izomela iKZN kumcintiswano wamakwaya iMotsepe SASCE Foundation eGoli ngenyanga ezayo.
IKWAYA yabafundi babafana besikole samabanga aphansi iMthethomusha, esizinze e-Edendale, izomela isifundazwe saKwaZulu-Natal kumcintiswano wamakwaya iMotsepe SASCE Foundation eGoli ngomhlaka 4 kuNtulikazi (Julayi).
Umculisi walekwaya, uLinda Gama, owaqala ukuhola ikwaya yesikole ngenkathi efika kusona ngonyaka ka-2000, uthe ujabule kakhulu ngalokhu ngoba sekuphele iminyaka emine lesikole sagcina ukufinyelela kuleli zinga kulomcintiswano njengoba kusukela ngonyaka ka-2000 kuze kuye koka-2012 besihlezi sifinyelela ezingeni likazwelonke.
“Besesigcina esifundazweni kodwa sasesihlalaphansi njenge sikole sazitshela ukuthi kumele kube khona esikwenzayo, kumele senze ubulungiswa, nakhu ke go-2017 uNkulunkulu usesenzele umusa,” kusho uGama.
Uthe ikwaya ibisebenza kanzima ihlanganyela esikoleni njalo ngezimpelasonto nangamaholide izilolongela ukufeza inhloso yayo yokufinyelela kwizinga likazwelonke kulomcintiswano.
“Sifisa ukubuya nayo, sifisa ukubuya nayo impela, ibuye ize ekhaya eKZN ngoba asisazihambeli njenge sikole sesihambela manje isifundazwe sonke ngakho siyafisa ukuthi nje sibuye nayo,” echaza.
Kumanje ikwaya yesikole, eyalala isibili esifundazweni kwisigaba sengoma enqunyiwe eyasentshonalanga yaphinda yaphuma indawo yesithathu kwisigaba se-preamble, imatasatasa izilungiselela ukuyoqophela ukuvela kumdlalo kamabonakude owaziwa ngokuthi Imizwilili.
“Ngemva komcintiswano kazwelonke sizobe sesilungiselela ukuyoqopha i-CD yesikole.
Sibonga imeya uMnu. Themba Njilo ngalokhu ngoba uyena owasondela kuthina ngemva kokusibona sicula komunye umcimbi ayesimeme kuwona ngakho wayesefisa ukuthi isikole sibe ne-CD lesikole,” kusho uGama.
I-Soloist yekwaya yabafana uKabelo Rigala, umfundi ka-grade 5 oneminyaka eyishumi nanye (11), uthe ukuphumelela kwabo esifundazweni kanye nethuba lokuyoncintisana namanye amakwaya ezingeni likazwelonke kuyamuthokozisa kakhulu.
“Ngijabulile ngoba angikaze ngicabange ukuthi singafika kulelizinga esikulona manje kanti futhi konke lokhu imiphumela yokuzinikela kwethu sizilolonga ngezimpelasonto nangamaholide,” kusho uKabelo.
Uqhube ngokugqugquzela ontanga bakhe wathi kumele beqhubeke nokuzikhandla, besebenze kanzima kunoma yini abayenzayo futhi bengavumeli imibono engemihle ukuthi ibaqede amandla.
“Uma ungumculi kumele ulalele umculisi wakho, nalabo abakwezemidlalo ngokunjalo nabo kumele belalele abaqeqeshi babo, ukulalela kubalulekile kakhulu ngakho wonke umuntu kumele alalele futhi enze lokhu atshelwe khona ukuthi kumele akwenze,” kusho- yena.
UGama uthe ukwesekwa uthishanhloko wesikole, isigungu esingamele isikole (SGB), ubuholi besikole, othisha basesikoleni kanye nabazali bezingane kudlale indima ebalulekile ekutheni ikwaya iphumelele ngalendlela futhi ifike kwizinga ekulona kulomcintiswano.
“Ngifisa nokubonga uMnu. Linda Ngcobo osebenza kaSAPS, ubenegalelo elikhulu, kanye noMnu. Sfiso Mthalane waseThekwini, ongumdlali wepiyano, nguyena owasifaka ugqozu ikakhulukazi kulomucu esizoya nawo eGoli ukuthi asiqhubeke siwenze.
Nawo wonke umuntu obambe iqhaza, obeseka isikole sethu sithi nje siyabonga,” kusho yena.
Uthishanhloko wesikole, uMnu. Msizi Gumede uthe uyaziqhenya ngokuthi ikwaya yabafana izomela isifundazwe kumcintiswano kazwelonke.
“Njengezingqwele sijabule ngendlela eyisimangaliso ikakhulukazi ngoba umculo yinto esayiqala ngonyaka ka-2000 saya impela iminyaka ilandelana kwizinga likazwelonke kodwa ke besekuphele iminyakana emningana sagcina ukuthi siyoncintisana kwizinga likazwelonke,” kusho uGumede.
Uthe lokhu kusho ukuthi ikwaya yabafana baseMthethomusha izoqhakambisa igama lesikole futhi iphakamise ifulege lesifundazwe.
“Ngithanda ukubonga kakhulu njengo thishomkhulu wesikole uLinda Gama obezinikela ngamaholide nangezimpelasonto, obesengasalali ezama ukuthi labantwana beqeqesheke ukuze bezokwazi ukuphumelela.
Isikole sijabule kakhulu, egameni lesikole nasegameni le-SGB nabantwana nomphakathi wakwaMachibisa sithi phambili Mthethomusha phambili,” ephetha uthishomkhulu uMnu. Gumede.